Homeविचार/ दृष्टिकोणपारिवारिक सुखका सात शुत्र, जानी राखौ
November 27, 2018 Spnews विचार/ दृष्टिकोण Comments Off on पारिवारिक सुखका सात शुत्र, जानी राखौ
बिहान उठेदेखि हाम्रो दौडधूप सुरु हुन्छ । कामधन्दा, भेटघाट, मिटिङ, किनमेल । बिहान घाम झुल्किएदेखि राती अध्याँरो पोतिएसम्मै हामी चलयामान रहन्छौं । केही सोच्छौं । योजना बनाउँछौं । केही गर्छौं । आखिर यी सबै के का लागि ?
जवाफ तात्तातो आउँछ, ‘आफ्नो सन्तुष्टिका लागि । परिवारका लागि ।’
हाम्रो दैनिक चक्र नै आफु र परिवार सुखका लागि घुम्ने गर्छ । तैपनि हामीलाई परिवार सुख मिलिरहेको हुँदैन । एकातिर मिलाउन खोज्छौं, अर्कोतिर बिगि्रसकेको हुन्छ । एकातिर टालटुल गर्छौं, अर्कोतिर भ्वाङ परिसकेको हुन्छ । एकातिर उठाउन खोज्छौं, अर्कोतिर कोल्टे फेरिसकेको हुन्छ ।
आखिर किन सोचेजस्तो तालमेल मिल्दैन ?
जबकी हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेकै हुन्छौं । दिनभर दौडधूप गरिरहेकै हुन्छौं । आफ्नो स्वास्थ्य र बालबच्चालाई समेत छाडेर अनेक यत्न गरिरहेका हुन्छौं ।
खासमा परिवार सुख हामीलाई तबसम्म प्राप्त हुँदैन, जब त्यहीभित्र समस्याको समाधान खोज्दैनौं । हामी घर-परिवारभित्रको समस्या निदान गर्न बाहिर चाहर्छौं । समस्या घरभित्रै हुन्छ, हामीभित्रै हुन्छ । के हो समस्या ? कसरी त्यसको उपचार गर्ने ?
परिवार-सुख आफैमा एक शक्ति हो । उर्जा हो ।
सूत्र-१ः एकअर्काको सहयोग र सद्भाव
जस्तो कि, कसैले कमाएर ल्याउँछ । यसरी कमाएको कुरालाई जतन गर्ने वा बचत गर्ने काम अर्कोले गर्नुपर्छ । एक जनाले घर बाहिरको काममा खटिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरुलाई घरभित्रको काममा सहज बनाइदिनुपर्छ । यस्तो काम कसैले भनेर, अह्राएर भन्दा पनि स्वतस्फूर्त रुपमा भएको राम्रो ।
यसरी सबैले आग्रह/पूर्वाग्रह नगारी पारिवारिक दायित्व पुरा गरेपछि घरमा समृद्धि छाउँछ । पारिवारिक सुख प्राप्त हुन्छ ।
सूत्र-२ कार्य विभाजन
सूत्र-३ः अपेक्षारहित सम्बन्ध
सूत्र-४ः एकअर्काको सम्मान, श्रद्धा र माया
सूत्र-५ः आयआर्जन र आर्थिक व्यवस्थापन
परिवारमा कतिबेला कलह हुन्छ ? कतिबेला एकअर्काप्रति गुनासो बढ्न थाल्छ ? किन झैझगडा हुन्छ ? किन मनमुटाव हुन्छ ?
यसको मूल जरो भनेको, आर्थिक कुरा हुन् ।
सूत्र-६ः पारिवारिक मनोरञ्जन
अब यससँगै पारिवारिक मनोरञ्जन, रमाइलो पनि आवश्यक हुन्छ ।
सधै एकैनासले जीवन चल्दैन । जीवनमा अनेक उतार-चढाव आउँछ । त्यसैले बेलामौकामा हामीले खुसी साटासाट गर्नुपर्छ । मनोरञ्जन गर्नुपर्छ । घरका परिवारबीच मिठो-मसिनो बनाएर, कतै घुमफिरमा गएर, नाचगान गरेर । अनेक किसिमले रमाइलो गर्न सकिन्छ । हुन त चाडपर्वले पनि हाम्रो परिवारमा उस्ता उत्सव ल्याउने गर्छ । यद्यपी सधै चाडपर्व पर्खेर मात्र पनि हुँदैन । सानो सानो कुरामा खुसी बाढ्ने, एकअर्काको सफलतामा उत्सव मनाउने संस्कार बसाउनुपर्छ ।
सूत्र-७ः स्वास्थ्य खानपान र जीवनशैली
खासमा भन्ने हो भने हाम्रो खासगरी नेपाली समाजको लागि ठूलो भार बन्ने गरेको छ, दुखबिराम । किनभने दुखबिराम लागेपछि त्यसमा राज्यबाट खास सहयोग लिने प्रणाली छैन । रोगीको उपचार, औषधी, रेखदेख सबै परिवारकै सदस्यले गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के भने, जब एक जना मात्र बिरामी पर्छन्, समग्र परिवार उनकै स्यहारसुसारमा खटिनुपर्छ । यसले एकातिर व्यायभार बढाउँछ, अर्कोतिर तनाव ।
यसको भरपर्दो व्यवस्थापन भनेको पारिवारिक स्वास्थ्यको ख्याल नै हो । यो भनेको सबैजना स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ । कस्तो जीवनशैली अपनाउने, कस्तो खानपान गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बिहान चाडै उठ्ने, व्यायाम गर्ने, योग गर्ने, पूजाआजा गर्ने, ब्रेकफास्ट लिने, सरसफाई गर्ने जस्ता कार्यले रोगमुक्त जीवन बिताउन सकिन्छ । परिवारमा कस्तो खानपान गर्ने ? कस्तो जीवनशैली अपनाउने भन्ने कुरामा पनि सबैले सही बाटो रोज्नुपर्छ ।
बाँदरआतङ्कले स्थानीयबासी समस्यामा
आफ्नै फोटोमा लेखेको शब्दले हिरासातमा पुगे एक व्यक्ति